Ama-Hemahomes: Anokuthula, Asekhaya futhi Avikelekile.
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Grace
I-HemaHomes iyindawo yabafuna ukuhlehla kanye nabathandi bemvelo. Indawo yokuphumula nokuphumula. Igugu langempela labo bonke abafuna ukujabulela indawo ezolile nenokuthula.
“I-Hema” yigama lesiSwahili elisho ukuthi “Phefumula & Netende”. Sihlose ukwenza isiqiniseko sokuthi sonke isikhathi osichitha lapha, uvikeleke kahle futhi ukhululekile.
Igumbi lezivakashi lihlanganyela ngesango elikhulu lenkomponi kodwa lizimele endlini enkulu lapho mina nomndeni wami sihlala khona. Indawo yethu ivikeleke kahle, futhi inkomponi yethu inezinja ezi-4 kanye nesistimu yokuphepha eshaqisayo uma kuba nanoma yisiphi isimo esiphuthumayo.
Izindlu zezivakashi zifakwe kahle ukwenza ukuhlala kwakho kungabi namandla. Leli khaya elizimele lifaka ikhishi elinefenisha ephelele, indawo yokuhlala, kanye negumbi lokugezela lesimanje elinezinto ezihambisana nezinto zangasese.
● Amashawa ashisayo
● I-inthanethi enesivinini esikhulu
● Amasevisi Elondolo
● Ukupaka Izimoto
Yonke indawo ibonakala ngokuthinta kwayo isimanje-Afrika ngokusebenzisa imihlobiso yayo. I-HemaHomes izungezwe indawo yemvelo - izihlahla, izimbali eziheha izinhlobo ezihlukahlukene zezinyoni futhi inikeza isipiliyoni sasepulazini lasemadolobheni kubavakashi abafisa ukuhlala endaweni eluhlaza kanye nesimo sezulu esipholile.
4.81 ·48 okushiwo abanye
Indawo ithule futhi ivikelekile.
Umsingathi angafinyelelwa nge-imeyili nangomakhalekhukhwini noma nini sosuku nasekhaya ngezimpelasonto eziningi; ungase futhi usizwe ngumsebenzi wasendlini kanye nomsebenzi wasengadini abakhona ekhaya lonke - ungakwazi ngisho ukungena nabo.